WOWOW Bronze Centerset Bridge Ikhishi ompompi 4 Hole nge Side Sprayer -
Ikhaya / Ikhishi Faucets / I-Rustic Bridge Ikhishi Lompompi / WOWOW Bronze Centerset Bridge Ikhishi ompompi 4 Hole nge Side Sprayer
WOWOW Bronze Centerset Bridge Ikhishi ompompi 4 Hole nge Side Sprayer
【Solid Brass UkwakhiwaFa Isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu esindayo senziwe ngethusi eliqinile le-premium futhi sinesisindo esingu-7.76 Ibs. I-Brass ekhishini lompompi wokugoba onomphetho weBrown Bronze ukugqwala, ukugqwala, ukumelana nokuvuza, futhi kuqinisekisa ukuphepha kwamanzi nempilo ende.
Noma ngabe ufuna ikhishi eliphefumulelwe uVictoria noma isikhala esiqhakazile sango-1950s, idizayini yebhuloho le-retro iyindlela ethandwa kakhulu yokwakha ikhishi lesitayela sevintage noma indawo yokugezela.
isitayela: Isitayela A-ne side sprayer
Color: Ibronze eBrown
Isikhala Sokuphakama: Intshi ye-6.3
Ukufinyelela Spout: Intshi ye-7
Isici: 2 Izibambo, ompompi abayi-8 intshi
Izimbobo ezidingekayo: 2
Ngokucindezela inkinobho, i-high-pressure brass side sprayer ingafafaza umfudlana onamandla wamanzi ukuhlanza izitsha kanye nokungcola ekhoneni. Ipayipi lokudonsa elifakiwe lifika kumasentimitha angama-59, kulula ukuhlanza noma isiphi isikhundla esizungeze usinki.
I-High Arc Spout ene-ABS Aerator
I-aerator esebenza kahle inikeza ukugeleza okushelelayo futhi yonga amanzi angama-50%.
Awekho amanzi anzima nesikali.
I-aerator iyatholakala, okulula ukuyihlanza noma ukuyishintsha.
Ukuthinta okuthambile ngeminwe ukususa isikali ne-calcium.
I-360 ° i-Faucet ejikelezayo enezibambo ezimbili
2 lever isingatha ukuphatha okulula kokushisa kwamanzi nevolumu ngokunembile.
Idizayini ejikelezayo ye-Arc 360 °, ilungele usinki ophindwe kabili kanye nama-lavabos.
Umpompi wasekhishini we-8-intshi we-Centerset Bridge ulingana nezimbobo ezi-2.
Solid Brass isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu
Izinto eziqinile ze-Brass, ukugcinwa okulula, ukuqina okuphezulu, ukusebenzisa impilo isikhathi eside.
Qinisekisa impilo nokuphepha kwawo wonke amaconsi amanzi
I-Brown Bronze Faucet
Ukuqedela okuphelele kobuso beBronze Bronze, ukubukeka kwamavini nge-glossy key kodwa isicwebezelisi esihle.
Umklamo oyingqayizivele oyingqayizivele, i-spout ephezulu yeVictoria, zombili zezitayela ezisebenzayo nezisebenzayo.
Isicelo: usinki wasekhishini / umcengezi wasekhishini / indlu yokugezela / ihhotela
I-SKU: 23115A1A Categories: I-Rustic Bridge Ikhishi Lompompi, Ikhishi Faucets